Solve the Drive won't Work on Windows | OS-UKUBEKA Blog
December 26, 2018 ezokuhweba ngekhompyutha Computer, Electronics, OS-UKUBEKA, OSGEAR Ukusekela, Imikhiqizo, Storage, Ubuchwepheshe 0
Use the troubleshooting instructions below if you install CD, DVD noma Blu-ray drive akakwazi ukufunda noma yimaphi akwazi ukugcina noma abakwazi ukubona noma yikuphi akwazi ukugcina.
Iziqondiso kuzokusiza ukuxazulula inkinga kwezinye izimo uma idrayivu akayekanga ngokuphelele. Imiyalelo ngezansi ingasetshenziswa kokubili ngaphakathi nangaphandle CD, DVD noma Blu-ray ngemoto kodwa ezinye eziyisisekelo kungase kube ehlukile kancane. Nakuba le ndaba yokungaziphathi-CD-ROM ayisebenzi kungakhungathekisa wabasebenzisi, kungabangela ukulahleka kwedatha, ukuphazamisa inqubo umsebenzi evamile, njalo njalo. Ulwazi ukuze unqobe isiphambeko-CD-ROM ayisebenzi kuyasiza uma umuntu efisa ukuxazulula iphutha singekho kwanhlobo isikhathi. Esihlokweni inikezwe, thina siyakuba ukubheka izixazululo eziningi ukuxazulula inkinga ka-CD-Drayivu ayisebenzi.
ingxenye 1: Ukusebenzisa idrayiva yesisetshenziswa >>>
Lena indlela eyisisekelo ukuqeda le nkinga ye-CD-Drayivu ayisebenzi. Nge izinyathelo ezimbalwa ezilula ukulandela, abasebenzisi bangaba zabo DVD futhi-CD-ROM obonwa uhlelo. Nazi izinyathelo:
Thepha ukhiye Windows + R ukuvula Run ibhokisi lengxoxo.
Esikhathini Control Panel, ukuthola ebhokisini lokusesha, kanye nohlobo 'nkinga', bese wengeza ku 'Ukuxazulula'.
Kufanele uchofoze 'kudivayisi Lungiselela' efakwe ngaphansi idrayiva Sound Into. Abasebenzisi angase sebezoyalelwa uthayiphe amaphasiwedi ayo isiqinisekiso.
Uma ngabe lokhu kungaxazululi iphutha, ungakwazi udlulele isixazululo olandelayo.
ingxenye 2: I-Common Iningi Isizathu Disk lakho Engekho >>>
Ngokungafani idrayivu kanzima ukuthi imikhumbi kwikhompuyutha ayiqoshwa eshalofini noma drive yangaphandle, oshayelayo extra kanzima owathenga kungukuthi ezithunyelwa ifomethiwe futhi ilungele ukusetshenziswa njalo. Kunalokho, abekho esimweni i-nhlobo umlando Umqondo wukuthi umsebenzisi ekupheleni uyokwenza lokho abafisa ne drive, ngakho akukho inzuzo preformatting noma ngenye ekushintsheni drive efektri. Kanjalo, uma ubeka idrayivu ohlelweni lwakho, Windows umane elindela ukuba unqume ukuthi wenzani nge idrayivu esikhundleni ukufometha ngokuzenzakalelayo futhi ukulifaka uhlu drive.
isinyathelo 1: Chofoza Qala > Run. Thayipha ” sysdm.cpl ” ebhokisini lengxoxo ekubonisa. Chofoza kulungile futhi kufanele ulethe ku- “Izakhiwo System” ibhokisi lengxoxo.
isinyathelo 2: Yiya kuthebhu “Hardware” bese uchofoza “Umphathi wedivayisi” kanye lapho bathole umshayeli wakho. Imayini wabizwa ngokuthi “DVD / CD-ROM oshayelayo.” Qhafaza kabili ukubonisa elikuqukethe futhi kufanele kube khona enye idivayisi ngaphansi kwaso. Imayini waba uphawu lombuzo kodwa kwezinye izimo, kungase babe umbabazi eduzane negama. Imayini wabizwa ngokuthi “AOPEN DUW1608 / Fika” kodwa uma wakho lihlukile, kulungile.
isinyathelo 3: Qhafaza kabili ihadiwe esanda lwembula “AOPEN DUW1608 / Fika” futhi uzovela siqu ibhokisi. Yiya “Driver” ithebhu bese ukhetha “Buyekeza Driver…” kusukela izinkinobho ngezansi.
isinyathelo 4: Manje, ukhetha “Faka kusuka uhlu noma indawo ethize” bese uchofoza Okulandelayo. Ebhokisini elilandelayo ukhetha “Musa ukusesha. Ngizokwenza ukhethe umshayeli ukufaka” futhi futhi, qhafaza olandelayo. A ibhokisi ezahlukene sizobonisa hardware ehambisanayo umshayeli wakho. Mina akhethiwe kusuka phansi ekukholweni kwaba yakamuva, yayibizwa ngokuthi “CD-ROM-Drive [izilungiselelo IMAPI 1,5].” Chofoza okulandelayo futhi uqedele imiyalelo ikunika.
ingxenye 3: Mhlawumbe-ke Olubangelwa DVD okuyiphutha >>>
Chofoza hardware ithebhu
OE ATA / ATAA isilawuli ihlelo chofoza kabili ide isiteshi
Chofoza eziphambili kulungiselelwa ithebhu
Kudivayisi 0 noma 1 Kufanele kube khona DMA ultra (hhayi POI) zamanje ijubane ukudluliswa kufanele kube DMA ultra
(uma kungenjalo) khipha kudivayisi drive futhi DVD drive (ngokuqondene nami kwaba Pioneer drive) – iqalise ikhompyutha ukuze faka – kanye kabusha ukuqala kabusha khompuyutha – uphinda 1 – 7 futhi ukuthi kokubili amasethingi emuva ultra futhi inkinga iduduzekile.
Part4: Ukushintsha izabelo drive optical incwadi >>>
Ngephutha, zonke izinguqulo Windows ukwabela drive optical uhlamvu drive etholakalayo ezayo kulandela labo nganoma yisiphi amavolumu wendawo. Uma kamuva ufake disk eyengeziwe kanzima noma repartition drive yakho ukudala amavolumu ezengeziwe, uhlamvu eyabelwe idrayivu optical zingashintsha, okungase ukudida isofthiwe olufakiwe ezama ukufinyelela drive optical njengoba incwadi endala.
Ungagwema lokhu “izihlalo zomculo” reassignment ka-optical drive tinhlavu ngesandla ukwabela idrayivu optical incwadi drive ukuthi ingaphezu kwe-incwadi drive nganoma yisiphi umthamo wendawo noma kwinethiwekhi. Ukwabela atholakalayo incwadi eliphakeme drive, nge, ku-idrayivu optical kuvimbela Windows angasaphinde esishintsha incwadi drive. Uma une oshayelayo emibili optical, wona Z: futhi Y:. Ukwabela incwadi ehlukile idrayivu idrayivu optical e-Windows XP, ukuqhubeka kanje:
Ikhompyutha Ukuphathwa ekhombisa ukushayela izabelo incwadi
1. Kusukela Control Panel, ukhethe Amathuluzi Administrative > Ukuphathwa computer.
2. Nweba esihlahleni uma kunesidingo ukukhombisa izinto legatsha Storage.
3. Chofoza Disk Management, futhi ukuthola drive yakho optical e ifasitelana ephansi kwesokudla.
4. Chofoza kwesokudla i-optical drive isithonjana ukubonisa imenyu ngokwengqikithi, bese ukhetha Guqula Drayivu Incwadi kanye Izindlela yemenyu ukubonisa Guqula Drayivu Incwadi kanye Izindlela lengxoxo.
5. Chofoza Guqula inkinobho bese usebenzisa uhlu olwehlayo ukwabela incwadi drive atholakale idrayivu optical.
6. Londoloza izinguquko zakho uphinde uphume. Uma wamukela ushintsho, uhlamvu entsha drive kuyokwenzeka ngokushesha.
Musical DRIVE IZINCWADI
Uma ushintsha isabelo incwadi drive i drive optical, wenze kanjalo ngokushesha ngemuva kokufaka nom uhlelo lokusebenza. Uma usebenzisa ukuthi drive ngaphansi incwadi yayo yasekuqaleni ukufaka isofthiwe, ukuthi isofthiwe ngeke kamuva uzame ukufinyelela drive usebenzisa incwadi drive ubudala.
Atheri ukuthi, umshayeli yakho kufanele ukusebenza emihle. Thola Ulwazi ephakeme, Chofoza lapha
Model Kudivayisi 64-bit Windows CPU HTC Intel HD Graphics Software processor Series Driver ukweseka ukweseka umshayeli nencazelo zomthetho Umakhala ekhukhwini umphathi wedivayisi izilimi Injongo Yomphakathi Technology_Internet Ubuchwepheshe Nokia OS-UKUBEKA Samsung
umphathi wedivayisi Series Driver ukweseka Injongo Yomphakathi Samsung izilimi Nokia HTC Ubuchwepheshe HD Graphics Samsung Galaxy ukweseka umshayeli CPU Sony Ericsson Intel Server processor Umakhala ekhukhwini nencazelo zomthetho OS-UKUBEKA 64-bit Windows Software Model Kudivayisi Qualcomm Technology_Internet Intel Smartphones